Ikhaya > Inkqubo yeqabane eliDibeneyo
Inkqubo yokudibana lithuba elihle lokuba ufumane imali ngokuthengisa iimveliso zesoftware efumana amabhaso ezifumana amabhaso. Samkela nabani na, kubantu ngabanye, amashishini amancinci ukuya kwiimagazini, ii-portal, kunye neevenkile.
DataNumen Inkqubo yokubambisana iyona nto ibhetele. Ngoba?
Ikhomishini ephezulu, inkqubo yeepesenti eguqukayo.
Kwintengiso nganye oyivelisayo, ufumana umvuzo ongaphantsi kwe-20% yemali yentengiso iyonke. Ikhomishini inyuka ngokuxhomekeke kwintsebenzo yakho! Umthamo wentengiso ephezulu weemveliso zethu zokubuyisela idatha kukuba, ipesenti yakho iya kuba njalo.
Singakwazi ukuqhubeka nokuqhuba amaphulo entengiso kunye nawe. Kukho amaxabiso akhethekileyo amaqabane, kunye nezaphulelo ezininzi, ukuthengiswa kweeholide, imeyile ngqo kunye nokunye okuninzi. Ungasoloko usenza isicelo sokufumana izixhobo zentengiso zalo naluphi na uhlobo. Unokujonga kwakhona ukonyuka kwepesenti yekhomishini xa usenza amalungiselelo iindaba postIng, imikhankaso yentengiso, kunye neentengiso. Ngamanye amaxesha side siyifumane imali yokuxhasa ezo zenzo. Unombono? Qhagamshelana nathi!
Nawuphi na umbuzo, iingcebiso kunye nezicelo ziya kuthathelwa ingqalelo kwaye uya kufumana ingxelo ekumgangatho ophezulu ngexesha elifutshane. Nceda usebenzise indlela yethu yokuphendula ukubuza nawuphi na umbuzo okanye wenze isicelo malunga nenkqubo yokubambisana.
Emva kokuba ubhalisile kunye nenkqubo yokubambisana, siya kukunika i-ID yokubambisana.
Ngale ID yokudibana, unokuvelisa ikhonkco loku-odola elikhethekileyo kuyo nayiphi na imveliso yethu. Ukuba ukuthengwa kwabathengi bakho ngekhonkco elikhethekileyo le-odolo, siya kuthi emva koko sikubone ukugqithisela kwaye sibeke ikhomishini kuwe.
Ngale ID yobulungu, unokuvelisa ikhonkco elikhethekileyo kulo naliphi na iphepha lewebhu kwindawo yethu yenkampani. Ukuba umthengi utyelele iphepha lewebhu ngale khonkco yahlukile, icookie iya kugcinwa kwikhompyuter yakhe kunye ne-ID yakho ehambelana nayo egcinwe kuyo. Ke, ukuba umthengi uthenga iimveliso zethu ngexesha elizayo, icookie iyakwamkelwa kwaye uya kunikwa ikhomishini. Icookie isebenza iinyanga ezi-6 ukuba nje umthengi wakho wenza isigqibo sokuthenga kwisithuba seenyanga ezi-6 okokoko utyelele iphepha lethu lokuqala lewebhu, uya kuyifumana ikhomishini ngokuthenga kwakhe.
Fumana started ngoku
Inkqubo yethu yokubambisana ilawulwa ngu MyCommerce.com kwaye Ukukhawulezisa.com, Zombini ziinkokeli ezimiselweyo kwiinkqubo zokubambisana zesoftware. Unokukhetha enye ngokokukhetha kwakho. Inkqubo yokubambisana ilula kakhulu. Akukho zifihliweyo costkwaye kunjalo khulula ukuba ubhalise.
Bhalisa iNkqubo yokuDibana neMyCommerce.com
Bhalisa iNkqubo yokuDibana neFastSpring.com
Emva kobhaliso, siya kukuthumelela i-imeyile equlathe i-ID yakho yokudibana kunye nemiyalelo kwi start ukuze ufumane imali ngokukhawuleza!
Ukuba sele unayo iakhawunti yokubambisana kwi-MyCommerce.com okanye kwi-FastSpring.com, nceda ungene kwipaneli yokulawula kwaye usifumane ukuba sijoyine kwaye start. Isazisi sethu somthengisi 39118 KwiMyCommerce.com kunye datanumen kwi-FastSpring.com.